एमालेको पत्तासाफ पार्ने सत्ता गठबन्धनले चुनाव धकाल्यो ! - Compaq News
एमालेको पत्तासाफ पार्ने सत्ता गठबन्धनले चुनाव धकाल्यो !
सत्ता गठबन्धनले चुनाव धकेल्ने भएका छन् । संविधान अनुसार ५ जेठबाट स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भएपनि त्यस अगावै चुनाव गरिसक्नुपर्नेमा सरकारले तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने निश्चित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग १३ माघमा परामर्श गरे । भण्डारीले तत्काल स्थानीय चुनावको घोषणा गर्न आग्रह गरेपनि देउवाले गठबन्धनसँग छलफल गरेर मात्र बढ्ने जवाफ दिएको खुलिसकेको छ ।देउवाले आज केन्द्रीय कमिटीको भर्चुअल बैठकमा यसबारे छलफल गर्ने भएका छन् । उनी निर्वाचन धकेल्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी ऐन परिवर्तन गरेर २०७९ फागुनमा गर्ने गरी देउवा बढ्न खोजेका छन् । गठबन्धनको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले फागुनमा तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्न प्रस्ताव गरेर तरंग ल्याइदिएका थिए ।